Swizalend - ALinks
January 10, 2022 UKaruna Chandna imisebenzi, Swizalend
Ukuba sele unayo imvume yokusebenza, okanye ungummi waseSwitzerland, ungaya ezantsi ukuze ubone ukuba ungawufumana njani umsebenzi eSwitzerland. Ukuba awunayo imvume yokusebenza, into yokuqala oyifunayo
January 8, 2022 IShubham Sharma impilo, Swizalend
ISwitzerland yenye yezona nkqubo zononophelo lwempilo zibalaseleyo emhlabeni. ISwitzerland inezibhedlele ezingama-280 ezibonelela ngeenkonzo kubemi bayo. Izibhedlele zaseSwitzerland zinomthamo wezigulana ezingama-40,000 minyaka le. ISwitzerland ayinalo naluphi na ulawulo lukarhulumente okanye
Uyivula njani iakhawunti kwibhanki yaseSwitzerland? Iibhanki ezilungileyo kakhulu eSwitzerland
Disemba 21, 2021 IShubham Sharma imali, Swizalend
Icandelo leBhanki yaseSwitzerland liphuhliswe kakhulu. ISwitzerland yenye yeenkqubo eziphambili zebhanki emhlabeni. Inkqubo yabo yebhanki inobukhulu obukhulu kakhulu, ukugxila kwishishini kwifomu esemthethweni. Ibhanki ephakathi yeSwitzerland iyi
Ungayifumana njani indawo yokhuseleko eSwitzerland? I-Asylum eSwitzerland
Oktobha 14, 2021 IShubham Sharma ababaleki, Swizalend
Akukho mathandabuzo ukuba iSwitzerland intle, kwaye itsala abakhenkethi kwihlabathi liphela. Ngaphandle kokuya eSwitzerland, unokufaka isicelo sokukhuselwa apho. Kukho inkqubo efanelekileyo ekufuneka uyilandele ukuba uyafuna
Eyona ndawo idumileyo yokundwendwela eSwitzerland
Oktobha 14, 2021 IShubham Sharma Swizalend, hamba
Nangona iSwitzerland ililizwe elincinci, ishishini labo lokhenketho lincinci. IiAlps kunye nomkhenkce onyukayo, kunye nelizwe laseSwitzerland elibukekayo, iinqaba ezindala, amachibi acwengekileyo aluhlaza, kunye neencochoyi zeentaba eziphakamileyo kuzo zonke iindawo zongamele iSwitzerland.
Amazwe asimahla eVisa eSwitzerland, isikhokelo esikhawulezayo
Agasti 6, 2021 UKaruna Chandna Swizalend, ivisa
Ukuba unepasipoti evela eSwitzerland ungaya kumazwe amaninzi ngaphandle kwevisa. Amazwe asimahla eVisa eSwitzerland Onke amazwe eManyano yaseYurophu akolu luhlu lungezantsi kuba ummi waseSwitzerland unokufikelela kumazwe e-EU. IAlbania Andorra
Ungasifaka njani isicelo seSwitzerland Schengen visa?
Februwari 8, 2021 IShubham Sharma Swizalend, ivisa
Ngaba uya eSwitzerland? Kuya kufuneka ufake isicelo se-visa kuqala ukuya eSwitzerland. Omnye kufuneka afake isicelo se-visa ye-Schengen ukutyelela eSwitzerland. Olu xwebhu lwe-visa luya kukunika ukufikelela kwi-Schengen
Ukutyelela iSwitzerland, Nantsi isiKhokelo seXesha
Novemba 20, 2019 IShubham Sharma Swizalend
Uhambo oluya eSwitzerland lunika ubuhle bendalo obungenakuthelekiswa nanto kunye nokuzonwabisa nokuba utyelele ntoni. Ifakwe phakathi kweAlps kunye neJura Mountains, ilizwe eli-alpine ligcwele izixeko ezinobungqingili, imihlaba emangalisayo kunye nemisebenzi enomdla. Ngama-topographies ahlukeneyo kuyo yonke
Ezona Zona ziThuthi zilula eSwitzerland
Novemba 20, 2019 IShubham Sharma yibakhona, Swizalend
ISwitzerland inethiwekhi emxinwa yeendlela kunye noololiwe. Inethiwekhi yezothutho lukawonkewonke inobude obuziikhilomitha ezingama-24,500 2600 kwaye ineezitishi ezingaphezulu kwama-XNUMX kunye nezitishi. Umnatha wendlela waseSwitzerland uxhaswa ngemali yokuhamba kweendlela kunye neerhafu zezithuthi.
Indawo ezigqibeleleyo zeBhajethi zokutyela eSwitzerland
Novemba 19, 2019 IShubham Sharma iihotele, Swizalend
ISwitzerland yenye yezona zixeko zintle kwaye sesinye sezixeko ezilungileyo ukuhlala kuzo. Idolophu enkulu yaseSwitzerland iGeneva ikwayenye yeedolophu ezibiza kakhulu emhlabeni. Oku akuvelisi ngqo amagama 'indawo yokuhlala yebhajethi'